I-Crystallization yama-Cannabinoids nge-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
I-crystallization yisinyathelo senqubo esidingekayo ukuze kuvezwe ukuhlukaniswa kwe-crystalline CBD. I-Ultrasonic nano-crystallization (i-sono-crystallization) isetshenziswa kakhulu ukulungiselela ukuhlukaniswa kwe-crystalline okufana ne-CBD ukuzihlukanisa nesisombululo se-supersaturated. Ngamagagasi amaza e-ultrasound anamandla amakhulu, ukuyaluza okukhulu kuthuthukisa ukwakheka kwamakristalu we-CBD acwebile. I-Ultrasonic crystallization iyindlela elawulwayo, esebenza kahle kakhulu, futhi esheshayo yokukhiqiza ukuhlukaniswa kwe-crystalline CDB.
I-Ultrasonic CBD Crystallization
Ukuhlukaniswa kwe-crystallization kwe-CBD kuyinqubo yezulu lapho okuqina kwe-CBD kwakha khona kuphela. Ukuze ukhanyise i-CBD, i-solute (okungukuthi, uwoyela we-CBD o-distilled) kufanele ichithwe ku-solvent eyenza isixazululo se-supersaturated. Amagagasi e-Ultrasonic asebenza njengesikhuthazi sangaphandle esiqala ukwakheka kwembewu ye-crystal (nucleation) futhi esiza ukukhuthaza nokulawula ukukhula kwe-crystal.
Ama-solvents asetshenziswa ngokujwayelekile: i-pentane noma i-heptane.
Ngabe i-Ultrasonication ikhuthaza kanjani i-CBD Crystallization?
I-Ultrasonication iyindlela esebenza kahle kakhulu yokuxokozela ekhiqiza isisombululo esilinganayo se-supersaturated yesikhombi se-CBD kwisisombululo. Ngesikhathi sokuxokozela okukhulu kwe-ultrasonic kwesisombululo se-supersaturated, imbewu ye-crystal ingakheka kamuva ezosebenza njengezindawo zokukhula zamakristalu e-CDB. Ukuxakaniseka kwe-Ultrasonic kuqinisa ukudluliswa okukhulu phakathi kwezimbewu zokuqala ze-crystal nesisombululo se-supersaturated ukuze amakristalu akhule ngokushesha futhi ngokufanayo. Lokhu kusho ukuthi i-sonication iyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhuthaza nokulawula ukukhiqizwa kwamakristalu e-CBD.
I-Reactor ene-ultrasonicator I-UIP2000hdT ye-sono-crystallization yama-cannabinoids
“Uma i-ultrasound isetshenziswa kusixazululo se-crystallization, ingathinta kakhulu impahla yemikhiqizo yamakristalu. I-Ultrasonic irradiation inciphisa isikhathi sokungeniswa kanye nendawo ethintekayo futhi inyusa isilinganiso se-nucleation. Ngenxa yale miphumela, ngokuvamile ikhiqiza amakristalu amancane ngokusatshalaliswa kosayizi omncane uma kuqhathaniswa nekristallization ejwayelekile. Futhi, imisebe ye-ultrasonic ingadala ukuhlukaniswa kwamakristalu akhona abangelwa ukushayisana kwe-crystal noma i-sonofragmentation. ” [UKim noSuslick, 2018]
I-Crystallization Eshukumisiwe yama-cannabinoids
I-Ultrasonic crystallization (eyaziwa nangokuthi i-sono-crystallization) iyindlela yokulawulwa kwe-crystallization elawulwayo, edlula amasu ajwayelekile emvula ngokwakhiwa kwe-crystal ngokushesha ngenxa yokuxakaniseka okukhulu kwe-ultrasonic. Ukuxubana nokuxubana kwe-ultrasonic kungenisa amandla aphezulu e-kinetic engxenyeni ye-CBD ekhipha ne-solvent. Ngaleyo ndlela, kukhiqizwa isixazululo se-supersaturated lapho ukukhushulwa kwe-ultrasonic kamuva kukhuthaza ukudluliswa kwesisindo okusheshisa isilinganiso se-crystallization. I-Ultrasonic crystallization inqubo esheshayo, engalawulwa ngokunembile. Lokhu kunika amandla ukukhula kukasayizi ofanayo wekristalu kanye nezinga eliqhubekayo lekhwalithi yomkhiqizo. I-Ultrasonic crystallization ivumela ngokulungiswa kwamapharamitha we-sonication we-crystallization yamakhristali afanayo we-micron- noma we-nano. Khulisa amakristalu kusayizi ofanelwe ngokusebenzisa imingcele yenqubo esunguliwe. Ngokusetshenziswa kwe-sono-crystallization, kuyenzeka ukuthi kunciphise amakristalu angalingani, ahlinzeka ngokutholakala okuphezulu futhi ahlonishwa ngamakhasimende ngokusebenza okuphezulu kanye nezinzuzo zezempilo ezishiwoyo. Ukulawulwa okuqondile kwamapharamitha we-sono-crystallization kunika imiphumela ephindaphindekayo / ekhiqizwayo. Ngaphezu kwalokho, i-crystallization ye-ultrasonic yama-cannabinoids ingagcwaliswa ngokuphelele ngokulinganiselwa kunoma iyiphi ivolumu yokukhiqiza. Njengoba i-ultrasonic crystallization iholela ekuhlukanisweni kwekhwalithi ephezulu ye-CBD, izinqubo ezisezansi ezifana nokuhlanzwa zincishiswa zibe ubuncane.
I UP200St ingahlanganiswa nama-reactors amakhemikhali ashukumisayo ukusheshisa nokwenza ngcono i-crystallization.
I-crystallization / imvula esebenzayo
Ama-Ultrasonic Crystallizers we-CBD ahlukanisa umkhiqizo
I-Hielscher Ultrasonics ingumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi ngezinqubo ze-ultrasonic crystallization. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngemishini ehlukahlukene ye-ultrasonic crystallization ye-batch kanye ne-inline processing eqhubekayo. Imishini yeHielscher Ultrasonics 'ifakwe emhlabeni wonke ezindaweni zokucubungula ukudla nasemithini futhi igcwalisa amazinga aphezulu kakhulu. Ilungele inqubo yokumiswa kwenqubo, okuqhubekayo kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo kanye Nemikhuba Emihle Yokukhiqiza (GMP), izinhlelo ze-Hielscher ultrasonic crystallization ziyahambisana nezinhloso zakho zamazinga aphezulu okukhiqiza.
Izinzuzo zeHielscher Ultrasonics 'Cannabinoid Crystallization Systems
Amakristalu kaMicron- nano-sized (adjustable)
Ukukhula kwekristalu okulawulwa kahle
Ukukhula okungafani kwekristalu
Inqubo ye-Singe-Pass / One-Pot
Umphumela ophindekayo, ozalisekayo
Amplitudes aphakeme we-Sonocrystallization
I-Sonication enamagagasi aphezulu e-ultrasound anciphise isikhathi sokungeniswa ngaphezu kwe-sonication ngamagagasi e-amplitude aphansi. [UKim noSuslick, 2018] Amandla amakhulu e-ultrasonication kuma-amplitudes aphakeme akhiqiza ama-micro-turbulence aqinile ngokuqinile, amandla okushefa, kanye nokuphazamiseka. Lokhu kuhamba okuncane nokukhulu emaceleni ama-slurry we-supersaturated kuphumela ekwandisweni kokudluliswa kwenqwaba namazinga akhuphukayo we-crystallization. I-Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala.
Yonke imishini yakhelwe ukusetshenziswa kwe-24/7/365 ngaphansi komthwalo ogcwele futhi ukuqina nokuthembeka kwayo kuyenza ihhashi lomsebenzi enqubweni yakho ye-sono-crystallization. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zakho ze-sono-crystallization.
Ama-Amplitudes Alawulekayo Kahle we-Superior Crystallization
Onke ama-processor we-Hielscher ultrasonic alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela anokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ku-R&D nokukhiqizwa. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-sono-crystallization. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. Amaprosesa aseHielscher ezimboni ze-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi ahambise amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuthonya ukusabela kwe-sono-crystallization ngokunembile. Ngesikhathi ngasinye sokusebenza kwe-sonication, yonke imingcele ye-ultrasonic irekhodwa ngokuzenzekelayo ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi, ukuze ukugijima ngakunye kuhlolwe futhi kulawulwe. Sonication elilungile sono-crystallization esebenza kahle kakhulu!
I-Sonication elawulwa ngokushisa
Ngezinqubo ze-crystallization zama-cannabinoids, izinga lokushisa liyindlela ebucayi yenqubo ethonya umphumela nekhwalithi yamakristalu e-CBD. I-Hielscher sono-crsytallization reators ifakwe ijakhethi yokupholisa ukugcina inqubo yokushisa isendaweni. Ngaphezu kwalokho, amasistimu wethu we-sono-crsytallization afaka isoftware ehlakaniphile eqapha izinga lokushisa kwenqubo ngenzwa yokushisa exhumekayo. Kumenyu esebenziseka kalula, umsebenzisi angakwazi ukusetha umkhawulo wokushisa ongaphezulu nophansi. Ngokushesha nje lapho izinga lokushisa lenqubo lidlula ibanga lokushisa elibekiwe, i-ultrasonicator iyama kuze kube yilapho izinga lokushisa libuyela ku-pre-set ∆T Lokhu kukunika ukulawula okuqondile phezu kwenqubo ebalulekile ye-crystallization parameter "lokushisa".
IMultiPhaseCavitator yamaKristalu afanayo
IMultiPhaseCavitator MPC48 is a unique flow cell insert insert featuring 48 cannulas to inject the second phase (ie, the CBD distillate) directly in the cavitational hot-spot. Ngaleyo ndlela, ingxube efanayo kakhulu ye-CBD distillate kanye ne-solvent yakha isisombululo se-supersaturated, lapho i-nuclei yamakristalu e-CBD izokwakhiwa khona. Ukuchayeka kusiphenduli se-ultrasonic kuvumela ukukhula kwe-nucleation okungalawuleka ngokunembile nokukhula kwe-crystal. I-MultiPhaseCavitator yenza izinqubo ze-crystallization zisebenze kahle kakhulu futhi zivumela ngenxa yokulawulwa okunembile kokumiswa kwenqubo. Inqubo yokukhiqiza esezingeni eliphezulu iyingxenye Yezindlela Ezinhle Zokukhiqiza (GMP) futhi isiza ukukhiqiza imikhiqizo eqhubekayo esezingeni eliphakeme.
Isiphenduli se-Ultrasonic nge MultiPhaseCavitator ngokuthuthuka kwe-sono-crystallization
Xhumana nathi manje futhi usitshele ngezidingo zakho ze-sono-crystallization! Sizokuncoma ukuthi ulungiselele i-crystallizer ye-ultrasonic ne-reactor setup!
I-n-Pentane (i-CAS no. 109-6-0) iyisixazululo se-hydrocarbon, esivame ukusetshenziselwa ukwenziwa kwamakhemikhali ama-cannabinoids afana ne-CBD.
“I-n-pentane yayingenabo ubuthi obuyingozi ngemizila yomlomo noma yokuhogela, yayingesona isikhumba noma iso elicasulayo futhi ayizange idale ukuzwela kwesikhumba. Akukhombisanga ubuthi obuqongelela emazingeni afinyelela ku-20000 mg m (-3), okucishe kube yingxenye eyodwa yomkhawulo wokuqhuma ophansi futhi nezinga eliphakeme kakhulu elibhekwa njengeliphephile ukuhlola. Akuzange kubangele ubuthi bokuthuthuka futhi bekungeyona i-mutagenic. Ukusuka kulokhu nakweminye imininingwane ekhona, kuphethwa ngokuthi i-n-pentane ayidingi ukuhlukaniswa kwezingozi ezingaba nobuthi (njengoba kuchazwe yi-Annex VI ye-EU Dangerous Substance Directive, 1993), yize izakhiwo ezibonakalayo zikhombisa ukuthi kungakuhle ukuxwayisa ukuthola amandla wokulangazelela. Ngaphezu kwalokho, asikho isizathu sokwehlisa izincomo zamanje zokuvezwa komsebenzi. Okokugcina, yize kunezinkinga ezithile zokuphepha ezimayelana nokusha kwe-n-pentane, ukungabi bikho kwanoma yibuphi ubuthi obubonakalayo emazingeni okwelashwa okuphezulu kukhombisa ukuthi ingozi yemiphumela emibi yezempilo incane kuzo zonke izingxenye zabantu. ” (UMcKee et al. 1998)